Leli khasi lenziwe ngokulandela isimo esiphuthumayo se-COVID-19 esikhawulela amathuba okuhlinzeka nokufinyelela ngezikhathi zokwelashwa kwenkulumo. Abelaphi bezinkulumo obabona abakhonjiwe kuleli khasi babelane ngokukhululekile ngezinto zabo zokuvumela izingane nabantu abadala ukuthi babe nezinsiza zokuzijwayeza ekhaya ngenkathi belindele ukuqala kwemisebenzi ejwayelekile. Ukubonga kwami ​​okusuka enhliziyweni kuya kubo bonke.
Leli khasi alinazo izinhlelo zokusebenza zewebhu engizenzile, ezitholakala mahhala ku- I-GameCenter ngo-TrainingCognitivo. Ukungithumela isixhumanisi sokwenza okuthile noma into ethile ngibhalele yona ku- [i-imeyili ivikelwe] ucacisa igama lakho, isihloko somsebenzi kanye nencazelo emfushane yokuthi ngubani ozokusebenzisa. Kubalulekile ukuthi okuqukethwe okuthunyelwe akunazo izithombe noma okuqukethwe okuvikelwe yi-copyright. Ngokuhlonipha ubungcweti babasebenza nabo, izinto ezitholakele zishicilelwa ngaphandle kokuguqulwa ngabasebenza ngaphansi.
Bheka isithombe songwaqa S + nguSara Frizzarin
Bheka ungwaqa wokuqala wesithombe S + nguSara Frizzarin
Iphazili ye-SKI (isikhundla sokuqala nesokuphakathi) nguFrancesca Austoni
I-Memory SCI (isikhundla sokuqala) nguFrancesca Austoni
I-Memory SCI (isikhundla sokuqala nesokuphakathi) nguFrancesca Austoni
Qeda ukhulume indaba "Hedgehog, squirrel and fly" nguSara Frizzarin
Hlela kabusha bese uxoxa indaba "Uvemvane lukaTiffi" nguSara Frizzarin
I-Cloze 1 nguGiulia Savio
I-Cloze 2 nguGiulia Savio
Funda umusho bese uwuxhumanisa nesithombe esifanele ngu-Alice Martinelli
Isetshenziswa kanjani: Kulezi zivivinyo, umsindo ngamunye uhlotshaniswa nombala nomlingiswa.Umsebenzi wengane ukubona ukuthi umsindo okhulunywe ngumuntu omdala uyahambelana yini nomlingiswa wokuqala noma wesibili. Isibonelo, isikhathi ngasinye lapho umuntu omdala ephimisa igama elithi SA, ingane kuzodingeka ikhombe kumbuthano oluhlaza phezulu kwesikrini ukuthuthukisa umlingiswa. Uma ngakolunye uhlangothi umuntu omdala ebiza i-FA, ingane kufanele ikhombe kumbuthano onsomi. Izindima ngokusobala zingaguqulwa ngokucela ingane ukuthi ikhiqize uhlamvu oluyilo oluyilo, kuyilapho umuntu omdala kuzodingeka aqagele ukuthi yimuphi umsindo asanda kuwuzwa.
Umdlalo weCentral CA / CIA Goose Game
AmaSemantics - Uyini umuntu ongenayo
Semantics - Ukufana nokwehluka
Incazelo: ngemuva kokuhlanganisa umsindo / s / nenyoka kanye / ts / umsindo nesikere, qala isethulo, cindezela umcibisholo wesokudla ulalele umsindo noma uhlamvu bese ucela ingane ukuthi ithinte inyoka noma isikere a kuya ngomsindo ozwakalayo, isithombe esihambisanayo sizohamba kuphela lapho sisichofoza ngegundane.
Ukuqonda kwe-Lexical - izindleko
Incazelo: qala isethulo, cela ingane ukuthi ithinte ukudla ngokufunda phezulu ngakwesokudla, ucindezele umcibisholo ukudla okuzongena enqoleni.
Incazelo: qala isethulo bese ucela ingane ukuthi ithinte ongenayo, isithombe esifanele sizohamba kuphela lapho sisichofoza negundane.
Incazelo: qala isethulo bese ucela ingane ukuthi isithinte isithombe esiqala njengaleso esisenkabeni, lapho ingane ithinta isithombe esifanele, cindezela umcibisholo ongakwesokudla ukuletha ukuqiniswa.
Incazelo: qala isethulo bese ufunda uhlu lwamagama, cela ingane ukuthi ithinte isithombe esiqala ngaleyo syllable, lapho ingane ithinta isithombe esifanele, cindezela umcibisholo ongakwesokudla ukuletha ukuqiniswa.
Imiqondo Yendawo: Kukuphi?
Incazelo: kuzo zonke lezi ppt kumasilayidi okuqala ungabuza ingane ukuthi "uphi u-X?", Lapho ingane iphendula (ngokwesibonelo "kubhasikidi"), ngokucindezela umcibisholo ongakwesokudla isithombe sivela (isibonelo ubhasikidi) futhi, ngokucindezela futhi, ukuqinisa kuvela.
Kuma-slides okugcina, ngakolunye uhlangothi, kungenzeka ukukhuthaza ukwakheka kwemisho elula elula ngosizo lombala wombala: ungabuza ingane ukuthi "kwenzekani?" ukucindezela umcibisholo ongakwesokudla kuzovela into eyodwa yomusho ngasikhathi.
Umdlalo we-Metaphonological wehansi
Incazelo: Kulo mdlalo olula wehansi, imithetho iyona yakudala.
Ukudlala udinga ukubeka ifayili kumodi yesethulo. Ngokubala inani lebhokisi ofika kulo, uthunyelwa ngokuzenzakalela kusilayidi ngomsebenzi ozokwenziwa. Ukuvivinya ngakunye kunopopayi ocushiwe lapho igundane lichofozwa.
Ukubuyela esikrinini ngethrekhi, mane ucindezele isithonjana seMinnie Mouse ezansi.
Ukuphela kwephutha .. azikho izidladla kepha ... siqeqesha inkumbulo ngokubuza ingane ukuthi ikhumbule isikhundla sayo !!
Izigigaba zenyoka esikhaleni - / sp / intervocalica
Ababhali: UChiara D'Alessandro
Incazelo: Qala isethulo. Ingane ize iphindaphinde kuphela amagama abomvu, bese ichofoza kanye bese ilindela ukuthi konke ukwenziwa kwezithombe kwenzeke
Iqala nge ... i-syllable yokuqala i-MA-SA
Imiqondo ye-topological - bakuphi uDade noLili
Incazelo: Uma amagama efanayo, lapho ingane iphendula kahle, mane uchofoze ibha yesikhala bese izingane ezimbili ezifanayo zihamba, uma amagama ehlukile, chofoza umcibisholo wesokudla. Lapho omunye wale mibhangqwana emibili esondela kubhasikidi, kuzovela igama elithi "kuhle kakhulu".
Ungayisebenzisa kanjani: Ifayela lesikali segama likuvumela ukuthi uqeqeshe imemori yakho. Ukuzivocavoca kuqukethe ukukhumbula amagama afundwayo bese uwaphinda ngokuzwakalayo, ngemuva kwenani elithile lesikhuthazi (1 noma 2), lapho unxande usuphuzi futhi ungenalutho. Ukuze usebenzise leli fayela lifake kuphrezentheshini bese kuthi ngegundane noma nge-space bar wenze amaslayidi aye phambili. Iphoyinti lamandla lihleleka, sekuvele kunezinhlu ezi-4 ezinesikhala esingu-1 nolunye olunesikhala esingu-2, vele ufake amagama amasha kunxande
Ungayisebenzisa kanjani: Amakhadi omsebenzi wokuqamba okusheshayo, kodwa kumodi ye-stroop
Incazelo: Ukuzivocavoca yi-PASAT: kumodi yesethulo ucelwa ukuthi ukhumbule inombolo owake wayibona phambilini bese uyifaka kuleyo oyiyo
ukubukela. Ezinganeni esezivele zinalo msebenzi, imibala ikuvumela ukuba uwenze nzima umsebenzi, ngokwesibonelo:
ushintsho lomsebenzi luhambisana nombala (ngokwesibonelo ukusuka ku- + kuya ku-x)
Incazelo: Ucelwa ukuthi uqambe igama uma iphepha limhlophe, kuyilapho umbala wephepha uyadingeka uma unemibala. Ezinganeni ezinolwazi oluningi, umbala ungahlotshaniswa nomthetho othile (isb: "shaya isandla sakho uma kukhona okubomvu", noma "ungasho lutho uma kukhona okuphuzi").
I-lynx - umdlalo wokunakwa wokubuka
Incazelo: Isethulo samaphoyinti wamandla aqukethe ukulandelana kwemisebenzi ehlose ukukhuthaza inkumbulo, ukubona ngeso, ukunaka. Isiguli sicelwa ukuthi sibuke ngeso lengqondo futhi sibambe ngekhanda ukulandelana kanye nokuma kwemibala nobujamo. Ngemuva kokukhombisa ukulandelana ngakunye, iziguli zizocelwa ukuthi zenze okuthile. Ukulandela ukwenziwa kwalokho okuceliwe, kuyacelwa ukuthi kukhulunywe ngokulandelana kwemibala / bobunjwa ababoniswe ngaphambili, kulandelwa inqubo ebekiwe.
Ezingeni lokuqala, ingane izokwethulwa ngamakhadi amabili: ikhadi ngalinye linesilwane, umbala nenombolo. Ukuboniswa kwamakhadi kuzohlala imizuzwana emi-5 futhi ingane kuzodingeka ibambe ngekhanda kuphela inombolo nesilwane sawo womabili amakhadi. Ngemuva kombukiso, uzocelwa ukuthi ukhumbule inombolo noma isilwane.
Ekugcineni, ezingeni lesithathu, ngaphezu kokubamba ngekhanda inombolo, isilwane nombala wekhadi ngalinye, ingane kufanele iqaphele ngoba iziphazamisi zizovela ngesikhathi sokuvezwa kwamakhadi.
Incazelo: ingane ibona isithombe futhi kufanele ibhale igama elifanele, ngokushesha ngemuva kwalokho iba nempendulo ebonakalayo yokuqinisekisa ukuphendula kwempendulo
I-Times tables puzzle (itafula lezikhathi eziyi-8)